Free Fire Skyler: ဘာလို့ သင့်အသင်းမှာ ဒီ Superstar ကို လိုအပ်တာလဲ? | Codashop Blog MM
Free Fire Skyler: ဘာလို့ သင့်အသင်းမှာ ဒီ Superstar ကို လိုအပ်တာလဲ?
ကဲ တစ်ယောက်ယောက်များ Gloo Wall Demolition ကို မှာလိုက်လား? Prince of V-Pop အတွက် Sonic Wave တွေပြင်ဆင်လိုက်ပါ။
Skyler ကတော့ Free Fire ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နှင့် လက်ရှိရှာဖွေမှုအရှိဆုံး လူကြိုက်အများဆုံး ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးကတော့ Sơn Tùng M-TP လို့ခေါ်တဲ့ ဗီယက်နမ်အဆိုတော် – တေးရေးဆရာများ နှင့် သရုပ်ဆောင် အမည်ရင်း Nguyễn Thanh Tùng ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ OB26 Project Cobra ကတော့ နောက်ဆုံး Update မှာ သူက ဂိမ်းထဲသို့ Red Carpet နဲ့ ရောက်လာတာနဲ့ အခြားအသစ်စက်စက် Update များဖြစ်တဲ့ (MAG-7 Shotgun၊ Revive system အသစ် နှင့် အခြားအရာများ)ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ ရပါတယ်။ဘာလို့ လူတိုင်းက ဒီ CEO/စူပါစတား ကို စိတ်လှုပ်ရှားနေတာလဲဆိုတာနဲ့ သူ့ကိုလာလို့ အဖွဲ့မှာရှိသင့်တာလဲဆိုတာကို ရှာဖွေကြည့်လိုက်ရအောင်။
Skyler ကို ဘယ်လို​ရအောင်ယူကမလဲ?
Skyler ကိုပြီးခဲ့တဲ့ Free Fire မှာ မတ်လ ၉ ရက်က
Supestar Top Up ပွဲမှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်က ထိုအခွင့်အရေးကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်တော့ Skyler ကို ၄၉၉ Diamond နဲ့ ဆိုင်မှာရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၁၁၉၉ Diamond နဲ့သူ့ရဲ့ Superstar Bundle (​၀တ်ဆုံ၊ ဖိနပ်၊ မျက်နှာဖုံးနှင့် Lvl.4 Character Card များ ပါ၀င်ပါတယ်)
Skyler ရဲ့ Ability ဖြစ်တဲ့ Riptide Rhythm ကတော့ အရမ်းမိုက်ပါတယ်။ Skyler က Base Level မှညရှိတဲ့ ၅၀ မီတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ Gloo Wall ၅ ခုကို Sonic Wave တွေကို ရှည့်ကို ထုတ်လွှင့်ပြီး ဖြတ်ဆီးပါတယ်။ Gloo WAll တစ်ခု ထောင်တိုင်း သူ့ရဲ့4Point (Passive) Point ကစပြီး
HP ကို Recover စေပါတယ်။
Skyler ရဲ့ Ability ကို ပေါင်းပြီး ဘယ်လို အမြင့်ဆုံ (Level 6) ထိ တက်နိုင်လဲကို ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။
အဆင့်တစ်ခုစီမှာ အကွာအဝေးကို တိုးစေပြီး Riptide Rhythm ရဲ့ Cooldown Time ကို ဘယ်လို လျှော့ချတယ်ကို သတိပြုကြည့်ပါ။
Level 2: ၅၈ မီတာ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ Gloo Wall ၅ ခုကို ဖြတ်ဆီးပါတယ်။ CD က ၅၈ စက္ကန့်။ HP recovery ကတော့ ၅ points က စပါတယ်။
Level 3: ၆၇ မီတာ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ Gloo Wall ၅ ခုကို ဖြတ်ဆီးပါတယ်။ CD က ၅၅ စက္ကန့်။ HP recovery ကတော့ ၆ points က စပါတယ်။
Level 4: ၇၇ မီတာ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ Gloo Wall ၅ ခုကို ဖြတ်ဆီးပါတယ်။ CD က ၅၁ စက္ကန့်။ HP recovery ကတော့ ၇ points က စပါတယ်။
Level 5: ၈၈ မီတာ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ Gloo Wall ၅ ခုကို ဖြတ်ဆီးပါတယ်။ CD က ၄၆ စက္ကန့်။ HP recovery ကတော့ ၈ points က စပါတယ်။
Level 6: ၁၀၀ မီတာ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ Gloo Wall ၅ ခုကို ဖြတ်ဆီးပါတယ်။ CD က ၄၀ စက္ကန့်။ HP recovery ကတော့ ၉ points က စပါတယ်။
ဘာလို့ Skyler ကို သင့် အသင်းကို ထည့်သင့်တာလဲ?​
အကယ်၍ သင်က ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဆော့ရတာကြိုက်ပြီး Action တွေလုပ်ရတာကြိုက်ရင် Skyler က အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူ၏ထူးခြားတဲ့ စွမ်းရည်နဲ့ Gloo Walls အနောက်မှာ ပုန်းနေတဲ့ ရန်သူတွေကို သင်ချနိုင်ပါတယ်။ သင်၏အဖွဲ့က Cover Fire ကောင်းကောင်းနဲ့ Skyler က ရန်သူတွေ ဆီကို အလျင်အမြန်သွားနိုင်ပြီး တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ Team Modes (Duo or Squad) က သူအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။
Skyler ဂိမ်းထဲကို ရောက်ပြီး ကတည်းက သူ့ကို အကောင်းဆုံး Character တစ်ယောက် အနေနဲ့ ချက်ချင်း အသိအမှတ်ပြုပြပါတယ်။ Chrono တို့ Alok တို့လို့ Perennial Crowd လူကြိုက်များတဲ့ သူအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။
Chrono အကြောင်း ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောကြည့်ရအောင်။ Skyler က သူရဲ့ Riptide Rhythm ကျေးဇူးကြောင့် သူ နှင့် သူ့ အဖွဲ့တွေအတွက် HP ကိုပြန်လည် Recover နိုင်စွမ်းနှင့်အတူ Cristiano Ronaldo ရဲ့ Character နဲ့​ယဥ်နိုင်ပါတယ်။ သူရဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ ကုသမှုစွမ်းရည်အပြင် သူက Gloo Walls ကို တပ်ဆင်တဲ့အခါမှာလဲ ကာကွယ်ရေးအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ သူက သူတို့ကို အထူးစွမ်းရည်နဲ့ဖြိုဖျက်နိုင်ပြီး နောက်ကွယ်မှာ ပုန်းနေတဲ့ အားနည်းနေတဲ့ ရန်သူတွေကို ဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
သူ့အပိုင်းကတော့ Chrono က သူ့အဖွဲ့ကို ကာကွယ်ဖို့ Time Turner လို့ ခေါ်တဲ့ သူ့ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုနယ်ပယ်ကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ပိုကောင်းတာကတော့ သူရဲ့ အဖွဲ့၀င်တွေက Shield အတွင်းမှာ ရှိနေစဉ်တောင် သူများတွေကိုပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ သူက လှုပ်ရှားမှုမြန်လို့ အဲ့တာကတော့ သူရဲ့ အားသာချက်ပါ။
Character နှစ်ခုလုံးကတော့ အရမ်းကောင်းတဲ့ Abilities တွေရှိပင်မယ့် Chrono က သူ့ Force Field နဲ့ အမြန်နှုန်ူး နှစ်ခုကြောင့် နည်းနည်းအားသာတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ထင်ပါတယ်။
Previous articleValorant ဆိုင်မှ ကျွန်တော်တို့ ပြန်လိုချင်တဲ့ လက်နက် Skin များ
Next articleMakeasplash with these -themed skins!